Oromiyaa.gov.et - Home
kabajaa guyaa rivani Adii
dubartoota nanno isaanif fakenya ta'ani
BIiroon Dhimma Dubartootaa fi Daa'imman Oromiyaa Humna raawwachiisummaa Caasaa sadarkaa godinaa fi magaalotaa cimsuuf Eejensii Teeknoolojii Quunnamtii Qromiyaa waliin ta'uun mata duree Leenjii bu'uura kompuutera irratti magaalaa Bishooftuutti Kennamaa jira.
Gamaaggamni Hojii ji’a sagalii Godinaalee fi Bul.Magaalotaa Oromiyaa waliin Biiroon Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Oromiyaa gaggeessaa ture xumurame jira.
Gamaaggamni Hojii kun Godinaalee 20 fi Bul.magaalotaa 19 gidduutti kan gaggeeffame yoo ta’u ; martinuu gabaasa isaanii kan dhiheessan yoo ta’u ; akkasumas ciminaa fi hanqina mul’atan irratti gaaffii fi yaanni jajjabeessaa ta’ee kan itti kenname ta’ee ; ciminoota jiran cimsuun hanqinoonni jiran ammoo akka foyya’anii fi irratti kan hojjetamu ta’ee jira..
v Godinoonnii fi Bul. Magaalotaa bifa tokkoon hojii keessa galuu dhabuun ; bakka tokko tokkootti gender oditiin taasifamuu dhabuun akka hanqinaatti ka’ee jira.
v BMG(Barmatilee Miidha Gessisan) xiqqeessuun walqabatee amma illee iddoo tokko tokkootti gocha sukkanneessaan kan mul’atu ta’uun isaa hanqina ta’ee jira .
v Hojiin Biiroo keenyaa irra caalaan hojii sekteraalee waliin qindoominaan kan hojjetamudha; haata’u malee hunda isaa duguganii hojjechuu irratti hanqinoonni kan mul’atanidha.
v Aantummaa dubartootaaf qabnu guddisuun; hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan mirkaneessuu keessatti kan duraan hojjechaa turre caala yeroo ammaa kana hojjechuu akka qabnu I/A/Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Oromiyaa Aadde Yewaalaashet Gabayyoo dubbachuun gamaaggamicha xumuranii jiru.
Pages:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oromia Radio and TV
Copyright 2018 Oromia Women`s and Children Affairs Bureau Portal